ယှဉ်မိတာပေါ့။ ဟိုး.အဝေးကြီးက တိုးတက်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေ အနောက်နိုင်ငံတွေ နဲ့ မယှဉ်ကြည့်ရဲပါဘူး။
မမျှော်လင့် မော်ဝင့်လို့တောင်မကြည့်ရဲခဲ့ပါဘူး။ စိတ်ထဲဆင်းရဲလွန်းလို့ပါ။ လူချင်းတူပေမဲ့ ဘာလို့များ ငါတို့
ကအနှိမ်ခံ အားငယ်သိမ်ငယ်နေရတာလည်း..ဒါကိုလည်း အမြဲအတွေးဝင်မိပါတယ်။
ကဲ..တနှစ်တခါလောက်တော့ မြင်တာလေး နိူင်းယှဉ်ပြောပြမယ်လေ..။ဒီလို..ရှင့်...။ ကျမတို့ အမေရိကား ကနေ ထိုင်းကို Non immigrant visa multiple re entry permit နဲ့ဝင်လာတာပါ။ အရင်တုံးကတော့ ထိုင်းမှာ Permanent resident ကြီးပေါ့လေ။ ခုတော့ ဟိုးဖက်က resident ဆိုတော့ ဒီဖက်ကိုဖြုတ်လိုက်
တာ။နောက်မှ ပြန်လိုချင်လို့ ပြန်လျှောက်တယ်ဆိုပါတော့..။ အဝင်တုံးက ၃ လထုပေးလိုက်တော့ ဒီဖက်မှာ
visa status ချက်ချင်းပြောင်းလို့မရဘူးတဲ့။ အနဲဆုံး visa ၄၅ ရက်ကျန်မှ စလုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ နွေပူပူ
မှာ မယ်ငီးလည်း ဟတ်ကော့ကြီး ဒီမှာသောင်တင်နေပါတယ်။ အရင်တုံးကဟာတွေလည်း အနိစ္စသဘော
ကိစ္စချောသွားပြီဆိုတော့ စာရွှက်စာတမ်းအစကနေပြန်လုပ်ရတာပေါ့လေသူတို့အစိုးရရုံးတွေ ပြေးရတာပေါ့။
ကျမတို့က တခြားနိုင်ငံမှာ(ယောက်ကျားရဲ့အလုပ်လိုအပ်ချက်အရ)သွားနေရပေမဲ့ ထိုင်းမှာ ထိုင်း visa
extension တနှစ်တခါလုပ်ရတယ်။ သူကထိုင်းအခြေစိုက် အနောက်နိုင်ငံတခုရဲ့ကုမ္မဏီမှာအလုပ် လုပ်
တာကိုး..။ သက်တမ်းတိုးဖို့ one-stop services center ကိုသွားရပါတယ်။ သူတို့ကုမ္မဏီ HR ဖက်ကအား
လုံးစီစဉ်ပေးရပါတယ်။ အားလုံးပြီးမှ ကျမတို့ကိုချိန်းပြီး အဲ့နေရာကိုလာခိုင်းတာပါ။ သူတို့ကုမ္မဏီက ကုမ္မဏီ
ကြီးဆိုတော့ ကျမတို့အပြင် တခြားနိုင်ငံခြားသားတွေလည်း အများကြီးရှိတယ်။ လိုက်ပါဆောင်ရွှက်ပေးတဲ့
လူမှာတောင် လက်ထောက်ကပါရသေးတယ်။ စာရွှက်စာတမ်းတပုံတခေါင်းပါတဲ့ ကျောပိုးအိတ်ကြီးထမ်း
လို့ပေါ့။ ဟင်း...အဲ့ဒီတုံးက ဓါတ်ပုံရိုက်ထားဖို့မေ့သွားတယ်။ အဲ့ ဒီနေရာက ရင်းနှီးမြုပ်နှံမူ့ကြီးမားတဲ့ ဘတ် သန်းပေါင်း ၃ဝ အထက် ရှိတဲ့ ကုမ္မဏီတွေကိုမှဝန်ဆောင်မူ့ပေးတာပါ။ သူတို့ပြတဲ့စာရွှက်စာတမ်းနေရာမှာ
လေအေးစက်တွေစိမ့်အောင်အေးလို့ အနံမရှိသော ရေအိမ်တွေသပ်သပ်ရပ်ရပ်( ဒါကအရမ်းအရေးကြီး တယ်လေ) နဲ့ ကွန်ပြူတာတွေရှေ့မှာ အလုပ်ရူပ်နေတဲ့လူဝင်မူ့ကြီးကြပ်ရေးဌာနကဝန်ထမ်းတွေကလည်း ဗျူဌာစွာဖော်ရွှေပြီး အပြုံးမျက်နှာလေးတွေနဲ့ အားလုံးကိုဆက်ဆံပါတယ်။ အဲ့ဒီမှာ နိုင်ငံခြားသား မိသားစု
တွေအများကြီး ဆိုင်ရာဆိုင်ရာ Company HRတွေနဲ့ လာကြတာပေါ့လေ။ အမျိုးသား Company HR
ကလူ အရင်ကြိုရောက်ပြီး Queue တိုကင်နံပါတ် ယူထားပေးတယ်လေ။ ကိုယ့်အလှည့်ရောက်မှ လဝက
အဲ့ဒီမှာ တခုပြောပြချင်တာ..ကျမတို့စာရွှက်စာတမ်းထဲက အရေးကြီးတာတခုကလက်ထပ်စာချုပ်ပါမူရင်း
မြန်မာရော နိုကြီလုပ်ဘာသာပြန်ထားတဲ့ မြန်မာ့နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနကတံဆိပ်တုံးကြီးခပ်နှိပ်ထားတဲ့
စာရွှက်ပေါ့။ ကျမမိတ်ဆွေများမြင်ဘူးကြမှာပါ A4 size မဟုတ်တဲ့ ခပ်ရှည်ရှည်နဲ့ခေါက်ရခက်တဲ့ legal
size 216mmx340mm( 8.4"x14") စာရွှက်ပါ။ ထိုင်းမှာရှိတဲ့မြန်မာသံရုံးကလည်း လက်မှတ်ထိုးတံဆိပ်တုံး ထုထားရပါသေးတယ်။တနိုင်ငံသွားတိုင်း ဘာသာတခုပြောင်း နိုတြီလုပ်လိုက် ဟိုကတုံးထု ဒီကတုံးထုနဲ့ အ မြဲတမ်းလုပ်လွန်းလို့ မူရင်းစာရွှက်လေးကလည်း ခပ်နွမ်းနွမ်းနဲ့ အောက်အနားတွေလည်းဖွာလံကြဲနေပေါ့။
ပထမဆုံး အရာရှိမမလေးရဲ့ အခန်းထဲဝင်တော့ (ဘယ်နေရာသွားသွား HR ဖက်ကထိုင်းတယောက်လိုက်
ပေးတယ်လေ) အရာရှိမကလည်း အဲဒီထိုင်းနဲ့ဘဲ စကားပြောတာပါ။ ကျမတို့ကိုတော့ ပြုံးပြတခုဘဲလုပ်တာ
ပါ။ သူကစာရွှက်စာတမ်းတွေတပုံတခေါင်းကိုလှန်လှော်ကြည့်ရူလက်မှတ်တွေထိုးပေးရတယ်လေ။ သူက
ကျမရဲ့ ချိနဲ့နေတဲ့စာရွှက်လေးကို တရိုတသေလေးကိုင်တွယ်ရင်း HRကောင်လေးကို လှမ်းပြောပါတယ်။ ဒီ
လိုအနေအထားစာရွှက်ဆိုရင် ဘယ်နိုင်ငံကဘဲဖြစ်ဖြစ် ငါတို့လက်မခံနိုင်ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ မြန်မာပြည်ကတော့
ငါလက်ခံတယ်။ ဒီလို စာရွှက်လေးရဖို့ ရန်ကုန်ကနေတဆင့် (လွန်ခဲ့သော ၁ဝနှစ်နီးပါးကအချိန်ပါ)လူကိုယ်
တိုင်သွားရတာတဲ့။ နေပြည်တော်ဆိုတဲ့နေရာတခုကို တနေကုန်ကားစီးပြီးသွားရသေးတယ်တဲ့ ။ တနေ့ထဲနဲ့ လည်းမရဘူးလို့ ဆိုပါသတဲ့။ ခုနက စာရွှက်စာတမ်းညစ်ပတ်နေလို့ ဂျပန်တတွဲကိုအသစ်ပြန်တောင်းခိုင်း လိုက်တယ်လို့ဆိုတယ်။
ဟင်း...ဒီလဝက မမ ဘယ်လိုလုပ်အားလုံးကို သိနေ လည်းမသိဘူး ..နောက်ဆုံးတခွန်းက နားထဲကနေ ထွက်ကိုမထွက်ဘူး.."သူတို့ဘဝတွေက သနားစရာကောင်းလိုက်တာ"..တဲ့။ မယ်ငီးထိုင်းစကားတတ်တာ
မပြောခဲ့သလို သွားလေးဖြီးလို့ ပြန်ထွက်လာခဲ့တာပေါ့လေ..။ အစကတော့ တကဲ့ကုမ္မဏီကြီးတွေမို့ စပယ်
ရှယ်(ဒီ..ရှယ်ဆိုတဲ့စကားက ကိုယ်တို့ဆီမှာ အန်မတန်မှ အသုံးများတာကိုး..) ဝန်ဆောင်မူ့ပေးတယ်လို့ထင်
ခဲ့တာ..။ နောက် အမျိူးသားက အမေရိကားဖက်က ဌာနကိုပြောင်းရွှေ့သွားတော့ ကိုယ်တို့လည်း အဲ့နေရာကို
တာတာလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ၄နှစ်အတွက် ၄ခါလောက်သွားလိုက်ရပါတယ်။
(အော်..နေပူတော်က နိုင်ငံခြားရေးဌာနမှာ တံဆပ်တုံးသွားထုတာကိုတော့ တခါက တနေရာမှာ ပါးပါး
ကဲ..ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းက ဒီလိုvisa extension ကိစ္စနဲ့ ပတ်သက်ပြီး နောက်အစိုးရရုံးထပ်သွားရပါတယ်။
ဒီတခါတော့ one stop service မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒီကအလုပ်နဲ့မသက်ဆိုင်တော့ဘူးလေ။ ကိုယ့်ဖာသာ ကိုယ်ဆိုတော့ အများသူဌာတွေ အသုံးပြုတဲ့ရိုးရိုး လဝကကို ဘဲသွားတာပါ။ ထိုင်းမှာနေတဲ့သူတွေအားလုံး
တော့သိကြမှာပါ။ Government complex Bangkok ဆိုတာလေ။ Chaeng Watthana လမ်းမပေါ်မှာရှိ
တော့ Chaeng Watthana Government Complex လို့လည်းခေါ်ကြပါတယ်။ ထိုင်းဘုရင့်သက်တော်၈ဝ
မြေအကျယ်(929,800 m2)ပေါ်မှာ စုစုပေါင်းဆောက်လုပ်ချိန်၃နှစ် နဲ့ ဘတ်သန်းပေါင်း ၂သောင်းကုန်ကျခဲ့
တယ်တဲ့။ ထိုင်းလို rai ဆိုတာဗမာလိုမြေဧကကိုဆိုလိုတယ်ထင်တာဘဲ။ ဒါဆိုရင် မြေဧကပေါင်း ၃၄၉ ဧက
ကျယ်ဝန်းတယ်ပေါ့။ အဆောက်အဦနေရာကိုဇုံ ၃ဇုံနဲ့ခွဲခြားသတ်မှတ်ထားပြီး ဇုံအေ Zone A(110 rai ) Zone B(197 rai) Zone C(152 rai) စီရှိကြပါတယ်။ A နဲ့ B ကိုအစိုးရရုံးဋ္ဌာနတွေအတွက်သုံးပြီး ကျန်တဲ့
C ကိုတော့နောက်ပိုင်းတိုးချဲ့လာမဲ့ နေရာနေအတွက်လျှာထားပါတယ်။
နေရာအခက်အခဲရှိတာ နိုင်ငံတိုင်းမှာပါ။ တဖြေးဖြေးနဲ့ စီစဉ်ပြီးပြောင်းရွှေ့ယူကြရတာချည်းပါဘဲ။ နယ်သာ လန်နိုင်ငံမှာအစိုးရရုံးရော အထူးသဖြင့် ပုဂ္ဂလိကရုံးခန်းကုမ္မဏီတွေပေါ့ သတ်မှတ်ထားတဲ့လူဦးရေ(ဒါလည်း
ဆယ်ဂဏန်းလောက်ပါဘဲ) ထက်ပိုရင်ဂိုးထူ မြို့ပြင်ပါဘဲ။ ဆင်ခြေဖုံးရပ်ကွက်တခုမှာ အားလုံးတစုတစည်း
မှာဖွင့်ကြရပါတယ်။ of course !!! အမှန်ဘဲပေါ့ရှင် သွားရေးလာရေးအတွက်လည်း ဘတ်စ်ကား ရထား
အရမ်းလွယ်ကူချောမောစွာ အစိုးရကစီမံပေးထားပါတယ်။ လူတိုင်း ရုံးပြင်ကန်းနားမသွားချင်ကြပေမဲ့လည်း
ဆက်သွယ်မူ့တခုစီအတွက် အလုပ်ကိစ္စများပေါ်လာရင်လည်း ပြေးရတာပါဘဲ။ တိုင်းပြည်တခုမှာ လူဦးရေ
သန်းပေါင်းများစွာရှိတော့ တယောက်ကို တခါဘဲလာရတယ်ထား..တွက်ကြည့်ပါရှင်..။ အုပ်ချုပ်သူအစိုးရ များကလည်း မိဘပြည်သူများကို (အဟိ..ပြောကြည့်တာ)ပြည်သူများအတွက် အစအစအရာရာ အဆင်ပြေ
အောင်တွက်ချက်ပြီး အများပြည်သူတွေဆက်သွယ်လာနိုင်တဲ့ရုံးတွေကို စနစ်တကျ တည်ဆောက်ပေးကြပါ တယ်။ အဟား..နဲနဲအဝေးရောက်သွားပြန်ပြီ..ပြန်လာပါ...နီးနီးနားနားလေးထိုင်းမှာဘဲကြည့်ရအောင်...
ကဲ..နိုင်ငံခြားသားတွေ ဗီဇာတွေဘာတွေသက်တမ်းတိုးမယ် နိုင်ငံသားတွေ ပတ်စ်ပို့လုပ်မယ်..အားလုံးဒီကို
လာရတာပေါ့။ မြို့နဲ့နဲနဲလှမ်းပေမဲ့ ဘတ်စ်ကားတွေ အဆင်ပြေပါတယ်။ BTS လို့ခေါ်တဲ့မိုးပျံရထားလိုင်းလည်း
အကြီးအကျယ်ချဲ့ဆောက်နေပါပြီ။ ဒါကတပိုင်း..အထဲဝင်သွားတော့ အပြင်က ပူလောင်တာတွေ ခဏမေ့
ထားလို့ရတယ်..အဲးယားကွန်းကြီးက အေးစက်လို့ စားသောက်ဆိုင်က သပ်သပ်ရပ်ရပ် လူတွေနားနေဖို့
စောင့်နေဖို့နေရာထိုင်ခင်းတွေက စီစီရီရီ..။ လဝက ထဲဝင်လိုက်ရင်လည်း သူ့ကောင်တာနဲ့သူ တိုကင်လေး ယူထိုင်စောင့် ကိုယ့်နံပါတ်နဲ့ကိုယ်။ ကြီးမားခန်းနားလှတဲ့အဆောက်အဦထဲမှာတော့ အကြောင်းကြောင်း ကိစ္စများစွာအတွက်လာရောက်ဆက်သွယ်ကြတဲ့ ပြည်သူတွေလည်း စိတ်လက်ပေါ့ပါးစွာ သွားလာနေကြ တာပါဘဲ။ အရေးကြီးဆုံးတခုက ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ ဆက်ဆံရေးပါ။ လူတွေကိုမအော် မငေါက်ပါဘူး မျက်နှာ
ကြီးရှစ်ခေါက်မချိုးထားတာတော့ အမှန်ပါဘဲ..ဟိုးတုံးက one stop center က စပယ်ရှယ်နေရာမို့လို့ထင် ခဲ့တာ။ ဒီမှာလည်း အိုကေစိုပြေစွာပါဘဲရှင်။
နေပူတော် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနမှာ ထောက်ခံစာတို့ တံဆိပ်ခပ်တာတို့သွားလုပ်တုံးက သတိရတယ်..
အပေါက်သေးသေးလေးရှေ့မှာ စုပုံတိုးခွေ့ ဘာမှန်းမသိ နေရာမရှိ သစ်ပင်အောက်ဖိနပ်ခုထိုင် မနက်ဖေါင်
တင်ပြီးရင် တကယ်ဖင်ထောင်စောင့်ပေတော့။ ထမင်းသွားစားချင်ရင် ကယ်ရီဆိုင်ကယ်နဲ့သွား ပိုက်ပိုက်ကုန်
ဘယ်သွားလို့ ဘယ်နားနေရမှန်းမသိ။ ကျမရန်ကုန်ကနေတူလေးတယောက်ကားမောင်းပို့ပေးတာ မနက်
၅နာရီကတဲကထလာရတယ်။ လူကအိပ်ချင်မူးတူးနဲ့။ သူ့က အီအား(ရှမ်းလို အဖေ့ညီမကိုအဒေါ်လို့ခေါ်တာ)
ပြောတော့ သူကဟုတ်ဖူးတဲ့။ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနဂိတ်ပေါက်စောင့်တဲလား..လို့ကျမကပြောတော့ သူက ပြုံးစိစိ..ဆင်းပါအီအား..ဖေါင်အရင်ပြေးတင်..ဆိုတော့ ဖေါင်ကြီးတင်ဖို့ ဖင်ကြီးထောင်လို့ ဟီး..အူယားဖား ယားပြေးရတယ်လေ..ဖယားဖယား....စာဖတ်နေသူကျမမိတ်ဆွေများ ရောက်ဖူးတဲ့သူ လက်ညိုးထောင် !!
အိမ်သာရနံ့နဲ့သင်းထုံနေတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်အတွင်းမှာ ဇရပ်သာသာနေရာလေးတခုထဲက အခန်းငယ်..(အင်း ၅ပေပတ်လည်တောင်မရှိလောက်ဘူးနဲ့တူတယ်)တခုရှိပြီး အပေါက်ငယ်လေးလျှာထိုးတံခါးလေးလို လုပ်
ထားတာ တွေ့ရပါလိမ့်မယ်..။ အပေါက်မှာ လူတွေကစုပုံလို့ပေါ့..ဘာလာလုပ်တာလည်း အစ်မလေး...
အမြန်လား..အပြည့်စုံပါရဲ့လား..ဘလားဘလားနဲ့ ကပ်ပြီးလာမေးတဲ့သူလည်းမရှားပေါ့။ လက်မှတ်ထိုးဆို
တော့ ဘာမှန်းမသိလက်မှတ်ထိုးပေးလိုက်တယ်။ နောက်မှသိရတာ ဖောင်တင်ပြီးရင်ပြန်ပေးတဲ့အချိန်မှာ
မှတ်ပုံတင်နဲ့တိုက်ပြီးကိုယ်ကဘဲပြန်ယူရမှာတဲ့။ ဇာတ်လမ်းတွေတော့အများကြီးပေါ့။ ဈေးသက်သာချင်ရင်
ရန်ကုန်ကနေ ညကတဲက ဘတ်စ်ကားစီး ရထားစီးလာ မနက်အစောကြီးရောက် ကားဂိတ် ဆိုင်ကယ်ဂိတ်
ရုံးပေါက်ဝမှာ စောင့်ပေတော့ ရုံးချိန်ဖွင့်တဲ့အထိ။ ပြီးရင် ဆိုင်ကယ် ကားဌားပြီး ကားဂိတ်ဆီအမြန်ပြေးပေ
တော့နို့မို့ရင် ကားမမှီ ညအိပ်ရရင် ဟော်တယ် တည်းခိုခန်းခကုန်ရအုံးမယ်။ လူသက်သာချင်ရင်တော့ ကား စီးလုံးမနက်ကတဲကဌားလာ ညနေစောင်းမှပြီးရင် ရန်ကုန်အမြန်ပြန်မောင်းသွား။ ကျမတော့၂ခါကြုံဖူးတယ်။
ပထမ တခါတော့ ကိုယ်ကအချဉ်လေ.. ၃သိန်းကျပ်တိတိကားခပေးရပါတယ်..။ ဆိုလိုချင်တာက မလွယ်ဘူး ဆိုတာပါရှင်။
အစိုးရဝန်ကြီးဋ္ဌာနရဲ့လိုအပ်ချက်ရှိနေသူတွေအားလုံး ပြည်သူတွေအားလုံးဆိုပါတော့ အချိန်ကုန်လူပမ်း ရန်ကုန်ကနေ များသောအားဖြင့်လည်း ရန်ကုန်ကနေလာကြတာကိုး..(မြန်မာနိုင်ငံလူသားအားလုံးနေပူ
တော်မှာမနေကြပါဘူးရှင်) တဆင့်လာကြရတာ လူတဦးချင်းရဲ့ အချိန်တွေလုပ်အားခ ငွေကြေးတွက်ချက်ပြီး
တနှစ်ဘယ်လောက်ဆုံးရူံးသွားတယ်ဆိုတဲ့ စာရင်းလေးတခုတောင်ထုတ်ပြန်ပေးလိုက်ချင်ပါရဲ့။ ရန်ကုန်
ဆိုတာ အစိုးရကိစ္စနဲ့ဘဲလာလာ စီးပွားရေးကိစ္စဘဲဖြစ်ဖြစ် ရောက်ခဲ့ရင်ရွှေတိဂုံဘုရားဖူးမယ် တခြားအထင်
ဂရနေရာတွေမှ အများကြီး။ ဒီ..ပူတော်ကြီးကိုတော့ ဟွန့်..ဆက်မပြောချင်တော့ပါဘု့..ရွှေညဏ်တော်စူး
ရောက်သောလူသားကြီးများရဲ့မဟာဦးနှောက်လေးကိုဘဲ ဂွနဲ့ဂလှော်ပြီး ဖွင့်ကြည့်ချင်ထှာ..အေ...
နောက်..ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကတော့ သူတို့ရဲ့ နိုင်ငံခြားရေးရုံးကိုရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီမှာ ထိုင်းတွေ ပတ်ပို့စ် လုပ်နေကြတာ တွေ့ခဲ့ရတယ်။ ဟင်းဟင်း...မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွန်ခဲ့သော ၂ဝနှစ်..ဝေးလွန်းပါတယ်လေ..
၁ဝနှစ်ဘဲထား..။ အဲဒီအချိန်မှာ ပတ်စ်ပို့တွေလုပ်ဖူးကြတယ်မူတ်လား..ဘယ်လိုလေးလဲ..စိမ့်စိမ့်လေး
အဝါးခံရ အတီးခံရ အပေါ်တက် အောက်ဆင်း ဟိုလူ့ အဘခေါ်ရ ဒီလူ့အစ်မခေါ်ရနဲ့ ထိုင်မရှိခိုးရုံတမယ်..
လူသားတွေ ရုံးပေါ်မှာ အာဏာပါဝါတွေရှိလိုက်ကြတာလေ..။ ကဲပါလေ..အားလုံးသိပြီးသားကို ချေးခြောက်
ရေနူးတော့ပါဘူး..။ ဒီကဟာတွေဘဲ ပြောပြမယ်..။
ဒီပုံကတော့ သူတို့ပတ်စ်ပို့လုပ်ရင် ပထမဆုံးဖေါင်တင်တဲ့နေရာပါ...
အပြာရောင်ခေါင်းစည်းထားတဲ့ နေရာမှာ မသိလျှင်မေး..အားလုံးသေသေချာချာပြောပြတယ်..ဘယ်လိုလုပ်ဖို့
ကမ္ဘာပေါ်မှာ ဘယ်နေရာဘယ်ဋ္ဌာနမဆို customer service ဆိုတဲ့ ဧည့်ဝန်ဆောင်မူ့ကောင်တာတခုက ရှိကိုရှိကြပါတယ်။ ဝင်လာပြီး ဘာလုပ်ရမှန်းမသိ ဘယ်သွားရမှန်းမသိ ကူညီပေးဖို့လေ...။ ရွှေပြည်ကြီးရဲ့
ဇရပ်ထဲမှာတော့ ပွဲစားဆိုတဲ့လူတန်းစားတွေဘဲ တန်းစီကူညီဆောင်ရွှက်ပေးတာတွေ့ခဲ့ရပါတယ်။ ပြီးလက်
ဖက်ရည်ဖိုးလေးပေါ့ရှင်..တခွက် ၅ဝဝတွက်ပြီးပေးရင် မယ်ငီးအတီးခံရမယ်..သောင်းဂဏန်း ထောင်ဂဏန်း
တောင်းတာပါ..တော်သေး.. ၃သိန်းမဟုတ်လို့... ဖယားဖယား..
ပေးတဲ့ ထောက် ခံစာ တစောင်ကို ထိုင်းနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဋ္ဌာနတံဆိပ်ထု ထောက်ခံချက်လာယူတာပါ။
မနက် ၉နာရီလောက်ရောက်တိုကင်ယူပြီး အမြန်ကြေးနဲ့လုပ်လည်းရ ရိုးရိုးလည်းရတယ်တဲ့။ စာနဲ့ရေးကပ် ထားတာပါ။ နေ့ချင်းပြီးတာပါဘဲ။ အမြန်ကြေးနဲ့လုပ်ရင်တော့ နေ့ဝက်နဲ့ပြီးတယ်တဲ့။ ကျမတို့က မြန်မာသံရုံး
စာဆိုတာနဲ့ အမြန်ကြေးမရပါဘူးတဲ့..။ ကဲပါလေ..ပိုက်ဆံသက်သာတယ် ထိုင်စောင့်ကြတာပေါ့ ဆိုပြီးရိုးရိုး
လုပ်ပါတယ်။ သူတို့ကကောင်းကောင်းရှင်းပြပါတယ်။ မြန်မာသံရုံးကိုဖုံးခေါ်ပြီး မေးရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်
ကြောင့်တဲ့..။ဖုံးလေးတခါဆက် ဘာဖြစ်လည်းနော့်..အော်..မိုးကျရွှေကိုကိုတွေက အမြဲဖုံးမကိုင်ဘူးတဲ့ ^_^
၉နာရီကနေဆက်လိုက်တာ ၁ဝ နာရီအထိ မြင်နေရတယ် ကောင်မလေးတွေ ဆက်ပေးတာ ၅ ခေါက်
လောက်ရှိတယ်။ နောက်ကျမတို့ကိုခေါ်ပြီးပြောပြပါတယ်။ ဟိုဖက်က တာဝန်ရှိသောပုဂ္ဂိုလ်ကြီးလေယဉ်
ကွင်းသွားနေလို့ပါတဲ့။ နေ့လည်၂နာရီလောက်ပြန်ဆက်ပါတဲ့။ ဒီတော့လည်း..စောင့်ပေါ့ရှင်...။ နေ့လည် ၂နာရီဆက်တော့ ကိုကိုကြီးမကိုင်ပါဘူးတဲ့ရှင်...။ ၃နာရီကျမှ အစည်းအဝေးခန်းမထဲရောက်နေလို့ပါတဲ့။
သူပြန်ဆက်ပါ့မယ်တဲ့..။ ကဲ..စာရေးမတွေအားလုံးကိုယ်တို့ ၂ယောက်ကို ဝိုင်းကြည့်ကြတယ်။ သူများတွေ
တော့ ပြန်ကုန်ပြီ လိုတာတွေရလို့ပေါ့..ကိုယ်တို့ ၂ယောက်က ဒီကစောင့်နေသူသီချင်းဆိုနေတုံး...။ နောက်
နောက်ဆုံး ရုံးပိတ်ခါနီးလေး..မှမိုးကျရွှေကိုယ်တော်လေး ပြန်ဖုံးခေါ်ပေးတယ်လေ။ ကျမတို့လည်း ကဲ....
ပိုက်ဆံသွင်း..အချိန်လည်းမရှိတော့ဘူး..စာရွှက်ကိုတော့ နောက်နေ့မှာပြန်လာယူပါ..တဲ့။ ကဲ..ထပ်ကုန်ရ
ပြီ တက်စီခ..ဘတ် ၃ဝဝကျော် တနေကုန်ညောင်းညာ...ဘယ်ကြောင့်လဲ!!!!!!
အောက်ဆုံးထပ်က စားသောက်ဆိုင်မှာ မြန်မာကလေးတွေတွေ့ခဲ့တယ်...သနားစရာကောင်းတယ် လခနည်းတယ်တဲ့ လက်မှတ်လည်းရှိဘူးတဲ့...ကဲ..မိုးရွှာတိုင်း မိုးယိုတဲ့ဒဏ်ကိုတော့ ခံရအုံးမှာပေါ့....
Posted by မီးမီးငယ် at 11:21 AM
စူးနှယျလေး March 22, 2015 2:01 PM
ဘာတခုမှအဆင်ပြေအောင် လုပ်မပေးတာနော်။ နားမလည်သူတွေလာမှ ပိုက်ဆံရမှာကိုး :)
မီးမီးငယ် March 22, 2015 8:48 PM
Anonymous March 23, 2015 3:49 AM
Yes, agree with u, meemee.
All the government servant think themselves they are above the law.
But really they are only just the servant for the people.
မီးမီးငယ် April 23, 2015 10:03 AM
We all think like you my dear...
In our country most of government servants believe themselves,
super big boss.
They are in high class than other people.
May be they are high class super thief and cheat people :P
Then all will go to hell....sure ^_^
San Htun March 25, 2015 10:06 PM
မြန်မာပြည်မှာက အစိုးရရုံးတွေအားလုံး ပြည်သူတွေ အဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးဖို့ ဆိုတာ ဝေးစွ...ခေါင်းမပါဘဲ အုပ်ချုပ်နေတာကိုး....သူများအစိုးရတွေနဲ့ များ ကွာပါ့....မမီး ခရီးသွားမှပဲ ပို့ စ်အသစ်တွေ ဖတ်ရတော့တယ်...
မီးမီးငယ် April 23, 2015 10:05 AM
Anonymous April 03, 2015 5:40 PM